Kaxandhaale: “Inta la Hubo 4 baa Saaka [Shalay Subax] Deegaanka lagu Dilay” – Radio Daljir
Juunyo 14, 2017 3:08 b 0
Inta la hubo afar ruux ayaa lagu dilay weerar saaka ay maleeshiyaad beeleed hubsayn ka geysteen deegaan dhaca xuduuda Gobolka Galgaduud uu la wadaago Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Afarta Ruux ee la dilay ayaa ku sugnaa nawaaxiga Deegaanka Kaxandhaale oo dhaca xuduuda Itoobiya, waxaana la sheegay in maleeshiya beeleedka falka geystay ay goobta ka carareen.
Afarta ruux ee la dilay oo beel ahaan ku abtirsada beelaha dega Gelinsoor ayaa maamulka deegaankaasi waxa uu ka hadlay Falkaasi oo dhacay shalay aroortii hore.
Guddoomiyaha degaanka Gelinsoor ee Gobolka Galgaduud, Cali Siciid, oo Waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa sheegay in maleeshiyadka Dilka geystay ay ka soo jeedaan Degaanka Saaxo ee Gobolka Mudug.
Gudoomiyaha ayaa Cumar Lakiman, Daljir cWaaq, u waramay.